घर यूरोपियन फुटबल स्टोरीहरू जर्मन फुटबल खेलाडीहरू Mesut Ozil बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
एलबी पूर्ण फुटबल प्रतिभा को प्रस्तुत गर्दछ जसले सर्वोत्तम उपनाम द्वारा जान्छ; 'जर्मन Zidane'। हाम्रो Mesut Ozil बचपन स्टोरी प्लस अनलल्ड जीवनी तथ्यहरूले तपाईंलाई बचाउनु पर्ने समयका सम्पूर्ण खाताहरु को अपने बचपन का समय तक लाताछ। विश्लेषणमा प्रसिद्धि, पारिवारिक जीवन र उनीहरूको बारेमा धेरै ज्ञात तथ्याङ्कहरू धेरै र बन्द र अन-पिच भन्दा पहिले आफ्नो जीवन कथा समावेश गर्दछ।
हो, सबैले मेसोट ओजिलको सहयोगका बारेमा रेकर्ड र क्षमताहरू खेल्न जान्दछ तर केही कुराले आफ्नो जीवनलाई पिच बाहिर बाहिर राख्छ जुन धेरै रोचक छ। अब थप adieu बिना, सुरू गर्न दिन्छ।
Mesut Ozil बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य: बाल्यकाल
Mesut Özil अक्टोबर 15, 1988, Gelsenkirchen मा, जर्मनी मा मुस्लिम ओफिल (बुबा) र गुलाजर ओजिल (आमा) मा जन्मिएको थियो। उहाँ अन्तिम बच्चा जन्मेका थिए। अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, उनी टर्की मूलको एक व्यावहारिक मुसलमान जन्मेको थियो। सारमा, उहाँ एक मुस्लिम जर्मन तुर्क हुनुहुन्छ जसको आमाबाबुले आप्रवासी हो। मासुतका ठूला आमाबाबुले जर्मनीको रहर औद्योगिक गृहनगरमा राम्रो जीवन बिताउन टर्कीबाट जर्मनी र भूमि र समुहबाट ल्याए।
मासुत ओजिलले आफ्नो जीवनलाई धेरै खराब गरी घरबाट बच्न थाले। उनी जर्मन औद्योगिक गिरावटको अवधिमा जन्मेका थिए जहाँ प्रवासका लागि बेरोजगारी दर 70% भन्दा बढी थियो। उनको आमाबाबुले पारिवारिक हिसाबमा राख्न को लागी एक कम भुक्तान गर्ने कामबाट अर्कोलाई संघर्ष गर्न संघर्ष गरे। उहाँका प्रवासी सम्पदा सीमित सामाजिक गतिशीलता र कतिपय अपार्टमेन्ट ब्लक द्वारा विशेषता थियो जुन गरिबीको संकेत थियो।
यी चुनौतीहरूको बावजूद, मेसोत सफल हुन कटिबद्ध थियो। सबै कुरा उहाँले आफ्नो हात राख्नुभयो राम्रो तरिकाले चलाइयो .. आफ्नो अकादमिकबाट शुरुवात फुटबल खेल्न सुरु गर्न खोज्नु। साँच्चै, मेसोटले गरिबीबाट बचाउने मार्गको रूपमा फुटबल प्रयोग गर्यो।
फुटबलको लागि उनको प्रेम सुरु भयो जब उनले आफ्नो घर नजिकको मनपर्ने खेल मैदानमा खेल्न थाले। मासुत ओजिल एक शुरुआती उमेर में एक गेंद लात के साथ इतना पागल हो गया। जब प्रयास गर्यो, उसले यसलाई घर लेउछ र उसको बिस्तारमा बिर्सायो। उनले धेरै समय व्यतीत गरे कि उनको बुबाले तिनको लागि धोका दिए।
Mesut Ozil बचपन फोटो
बढ्दै गयो, उनले आफ्नो बुबा भाई Mutlu बाट धेरै बल नियन्त्रण पाठ गरे जुन यो खेल खेल्ने मजाकलाई माया गर्थे। Mutlu उनको माइग्रेन्ट स्टेटस को कसैले यसलाई फुटबलमा बनाउन सक्छ कहिल्यै विश्वास गर्दैन। आदर्श रूप मा, Mesut Ozil का आप्रवासन पड़ोस (16,000 के आस-पास के निवासियों के एक डरलाग्दो उपनगर) कभी प्रतिभाशाली फुटबॉल के लिए एक प्रजनन मैदान के रूप में नहीं देखा था।
सफलताको लागी उनको दृढताले सफलताको सफलता पाएको छ जसले जर्मनी राष्ट्रलाई प्रेरित गरेको छ। तिनी एक आप्रवासी पृष्ठभूमिबाट पहिलो राष्ट्रिय खेलाडीको रूपमा मानिन्छ जसलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बनाइएको छ।
Mesut Ozil बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य: सुरुदेखि फुटबल
मेसट ओजिलले सोही निर्णय गरेपछि फुटबललाई गोली हान्ने निर्णय गरेपछि यो गरीबीबाट बाहिर निस्कने निश्चित तरिका थियो। उनले आफ्नो स्कूलको फुटबलमा सहभागी गरे पछि पछि साथीहरु सँगै आफ्नो फुटबल कौशल विकास गरेर "बंदर पिंजरा," (बागलुङको वरिपरि स्थित एक स्थानीय पिच)।
यो थियो 'बंदर पिंजरा' कि Ozil को रडार गुजरती कौशल पहिले विकसित गरियो। यो Gelsenkirchen को जर्मन बिस्मिर्क जिल्ला मा भयो। Mesut Ozil पिच मा त्यहाँ हुनेछ 'हरेक दिन के यो सूर्य, हिउँ वा वर्षा', उनको ठूलो भाइ Mutlu को अनुसार।
अनुभव प्राप्त भयो "बन्दर पिंजरा फुटबल" प्रवासी पड़ोस बाहिर ठूलो टोलीको लागि सफल परीक्षण प्राप्त गर्ने उनको मौका बढ्यो। पहिलो, उनले आधिकारिक रूपमा आफ्नो स्कूलको प्राथमिक फुटबल टोलीमा नामांकन गरे।
मासुरले आफ्नो युवा स्तरबाट अर्ध वयस्कमा प्रगति गरेका छन् जसले कलेज फुटबल स्तरलाई बुझाउँछ। उनको माध्यमिक स्कूल जर्मनीमा सबैभन्दा ठूलो थियो जसमा 1,400 भन्दा बढी विद्यार्थीहरू थिए। उनी अत्यन्तै मनपराएका थिए र अझै पनि विद्यालयको प्रतिनिधित्व गर्न चयन गरिएको थियो।
जोइजेन हेर्मनमान, ओजिलको माध्यमिक विद्यालयको उप-प्रमुख, फुटबलको साथको केटाकेटीको आकर्षण वर्णन गर्दछ 'एक साटो स्वतन्त्र', थप्दै: 'मलाई सधै महसुस भयो कि उसले बललाई बिस्तरमा लिन्छ।'
आफ्नो कलेज कक्षाको विन्डोबाट, ओजिलले Veltins-Arena, Schalke को घर स्टेडियम देख्न सक्थे। सपना देखाउने किशोरले आफ्नो मन बहाव गर्न हरेक कारण थियो। साथै उनको अनौठो प्रतिभाको रूपमा, विद्यालयले बंडेसलिगा पक्षको नजिकको सम्बन्ध राखेको छ।
स्कुलको साथ स्कूलको ओजिललाई सम्मान गरिएको थियो। त्यसबाहेक, उनी विद्यालयमा पनि बुद्धिमानी थिए। म्यानुएल नेवर, बायर्न म्यूनिख गोर्खापर पनि स्कूलमा थिए। उनी ओलिल भन्दा केही वर्ष थिए, जबकि जुलियन ड्रेक्सलर कम थियो। बेन्डिकिक हवर्ड्स र जोएल मितिप पनि विद्यालयका स्नातक हुन्। स्कूल फुटबल सर्तहरूको शर्तमा अगाडि बढ्यो। तिनीहरू धेरै प्रशिक्षण गतिविधिहरू थिए, बिहानको तीन सत्र, साँझ तीन बजे र साउनको दिनमा पाँच चोटि।
ओजिल एक आरक्षित विद्यार्थीको रूपमा चिनिन्थ्यो तर प्रशिक्षण र म्याच दिनमा उहाँका व्यक्तित्व परिवर्तन भयो। 'मैले पहिलो पटक मेसोतलाई देखेपछि, मैले उनीहरूको उमेर जाँच गर्न थालें।' कृष्णा, एक विद्यालय शिक्षक भन्छन्। 'त्यो धेरै सानो, शान्त थियो, पिच बन्द भयो। तर फुटबल क्षेत्रमा उहाँ एक्स्ट्रोवेट हुनुहुन्थ्यो, सबैभन्दा ठूलो खेलाडी। उहाँले आफ्नो छाती प्रभावको लागि बाहिर निकाल्नुहुन्छ। "उहाँ हाम्रो टोलीको सुपरस्टार हुनुहुन्थ्यो।"। '
यो ग्लेस्सेनचेन कलेजमा रहेको थियो कि ओजिलले मान्यता पाए कि उनी फुटबलको माध्यमबाट सफल हुनेछन्। उहाँले धेरै मान्यता प्राप्त गर्न थाल्नुभन्दा चाँडै उनले आफ्नो व्यक्तित्वका मुद्दाहरूको लडाई गरे। उहाँलाई पिचबाट धेरै शर्मीला बच्चा भनिन्थ्यो।
तिनको शिक्षकले यसलाई राखे "Mesut विद्यार्थी थिएन जुन एक भीडको सामना गर्न सक्छ। उहाँ सधैं धेरै शर्मीला हुनुहुन्थ्यो। तर यदि तपाईंले उसलाई पिचमा देख्नुभयो भने अर्को व्यक्ति थियो, किनभने त्यहाँ विस्फोट भयो। उसलाई बल दिनुहोस्, र उहाँ अरू कोही हुनेछ। "
'उनी एक शर्मीली कमजोर थिए तर 25 मिटरलाई गोली मार्न सकेन, धेरै छिटो दौड्यो र बलको लागि हरेक प्रतियोगितामा प्रवेश गर्यो। स्कूल क्लब कोच राल्फ मारानले भने. उहाँले जारी राख्नुभयो ... 'उनी एक वास्तविक सवार फुटबल खेलाडी थिए। मैले एक गेम 12 लक्ष्य शून्यमा जित्दा एक पटक सम्झन्छु। Mesut रन बनायो 10। अर्को टोलीको टोलीले मलाई अलग तुल्यायो र भन्यो, "अर्को पटक, कृपया घरमा घर छोड्ने साथीलाई छोड्नुहोस्"। '
कलेजमा, बिस्मिर्कका प्रवासी केटाहरू सबैभन्दा लोकप्रिय फुटबलर भए। उनीहरूले आफ्नो आईडी पाएको स्कूलको लागि जर्मन फुटबल निकायमा दर्ता भएको धेरै समय लागेन। यसले उनलाई ठूलो प्रतिस्पर्धामा भाग लिन योग्य बनायो।
आफ्नो जीवनको महत्वाकांक्षालाई नर्सिङ गर्न मेसट हरेक अतिरिक्त घण्टा समर्पित गर्दछ। सफल भएपछि, उनले एक कुरा गरे जुन सबैले अझैसम्म उनीहरूलाई सम्झाउँछन्। त्यो हो; प्रियजनहरूका साथ उनको सफलतामा भाग लिनुहोस्।
Mesut Ozil बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य: पारिवारिक जीवन
मासुत ओजिलको परिवारले जर्मनीको बिस्मिर्क जिल्लामा जीवन सुरु गरे। यो जर्मनीमा एक छिमेकि भन्दा टर्की ट्राग्रेन्ट द्वारा अधिकृत भएको छ।
तिनको परिवारले 1967 वर्षका श्रमिक बन्नु भएको टर्कीबाट जर्मनी पुग्यो। वर्षौंमा, तिनीहरू गरिबीमा बस्न थाले। यो मासुत थियो जसले फुटबललाई आफ्नो परिवारको भाग्य परिवर्तन गर्न प्रयोग गर्यो। उनी एक टर्की प्रवासी व्यक्ति थिए जसले आफ्नो परिवारलाई गरिबीबाट अविश्वसनीय धनको लागि अविश्वसनीय वृद्धि गर्न बनाए।
फेथर: मुस्लिम ओजिल ओजिलका पिता हुनुहुन्छ। उहाँ दोस्रो-पीढी टर्की ट्राभलन्त हुनुहुन्छ जुन उनी आफ्ना पितासँग जर्मनी फर्किने बेलामा6वर्षको उमेर थियो।
आफ्नो छोराले फुटबलमा बनाएको काम पछि स्विट्नु भन्दा पहिले, त्यो पहिले धातुको कामदार थियो। उहाँले आफ्नो जवानको समयमा बिक्री व्यक्ति (चिकन उत्पादन) को रूपमा बाहिर निस्कनुभयो।
मासुत ओजिलले आफ्नो पिता मुस्लिमलाई आफ्नो म्यानपावर बन्ने अनुमति दिए पछि उनको फुटबलमा बनाइयो। यो वार्ताले उनलाई आफ्नो पुरानो काम बिर्सन र फुटबल व्यवसायमा पूर्णतया ध्यान दिन सक्दछ। उनले आफ्नो छोराको क्या क्यारियरबाट अयोग्य रकम कमाएका छन्।
मातृभाषा: श्रीमती गुलाजिर ओजिल मेसट ओजिलको आमा हो। उनले एक घर पत्नीको रूपमा सुरू गरे जसको मुख्य जिम्मेवारी उनको बच्चाहरु को लागी पक्का थियो। त्यो उनको जोडीहरु द्वारा एक भाग्यशाली माइग्रेन्ट मा आमा को रूप मा वर्णन गरिएको छ जो कि उनको साथ एक साथ उनको जर्मनी को प्रवासी सम्पदा मा एक साथ थिए। एक मजबूत आमा / छोरा सम्बन्ध मा Mesut र Gulizar को बीचमा अवस्थित छ।
SIBLINGS: Mesut Ozil तीन भाइबहिनी छन्; अर्थात् Mutlu Özil, नेस ओज्ल र डुगू Özil।
तिनको जेठा भाई मट्लू ओजिल। उनी एकपटक एक फुटबल खेलाडी थिए जसले फुटबल खेल्न नसक्ने काम गरे तर उनीहरूको मेहनत गर्ने कौशल देख्न चाहने व्यक्तिहरूलाई मनोरञ्जन गर्न। उनीहरूले आफ्नो क्यारियरलाई अगाडी बढाउन मौका पाउँथे तर टर्की ट्राफिकले फुटबलमा कहिल्यै विश्वास गरेनन्। आज, उहाँले मित्तुर ओजिलको वृद्धिको लागि भण्डारको लागि श्रेय दिइन्छ। मेसोतले उनलाई धेरै फुटबल सिके। Dribbling, गुजरने, र प्ले बनाउने कौशल सबै को Mutlu बाट उत्पन्न भएको थियो।
मासुत ओजिलले दुई ठूला बहिनीहरू छन्; नेस ओजिल (दाहिने) र डुगू ओइजिल (बाँया)। उनीहरूले मासुत ओजिललाई पनि ध्यान दिएका छन्। नेस (दाहिने दायाँ) विशेष गरी एक पटक मेसोटको क्लोनको रूपमा वर्णन गरिएको छ। तपाईं, उनको तत्काल र सानो बडे बहिनी डुगू धेरै नजिक छ। उनीहरूको दाजुभाइको वृद्धिले आफ्ना प्यारी बहिनीहरूका लागि धेरै आर्थिक सहयोग प्रदान गरेको छ। आज, उनीहरूको जीवन लामो सपनाहरू भेटिए।
Mesut Ozil बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य: जीवनको सम्बन्ध
सबै भन्दा पहिले, मेसट ओजिल डेटिङ जीवन जटिल भएको छ। उनी आफैले आफूलाई गैर मुस्लिम महिलाहरुलाई आकर्षित गर्न खोजे जसले आफ्नो धर्ममा परिवर्तन गर्न चाहँदैनन्, यसकारण ब्रेकअपको लागी।
सुरू गर्न, मटूत ओजिल एक बार अन्ना मारिया का दर्जा दिया है, जो एक जर्मन मॉडल है और जो पहले से ही एक फिनिश फुटबॉल खिलाड़ी, पेका लैगर्लबूम से शादी की गई थी।
ओजिलको साथ तोड्न पछि, उनी अहिले बुशोडो नामक एक जर्मन रैपरि डेटिङ गर्दै छन्।
मेसोट पनि एडा हाईपिका, एक आश्चर्यजनक सौन्दर्य पेजेंट रानी पनि थियो जसले 2002 मा मिस वेनेजुएला बने।
ओजिलले मन्डी क्यापिस्टो, प्रोफेसर द्वारा एक एन.एन.एक्सएक्स बाट डेटिङ गर्न थाले तर उनको सम्बन्ध एक्सएनएनएक्सक्समा अन्त भएको थियो जब यो रिपोर्ट भयो कि उनले अर्को महिला देखेका थिए।
उहाँ पछि आफ्नो पूर्व प्रेमिका र प्रसिद्ध गायिका माण्डी क्यापिस्टो संग आफ्नो सम्बन्ध मा फर्कनुभयो। पुनः संघ यूनियन, 2015 नोभेम्बरमा सुरू भयो। उनीहरूको विभाजन पछि तिनीहरूले एत्तिकै हो कि उनी एक-अर्काको लागि हुन् र फेरि एकै ठाउँमा फर्किए।
Mesut Ozil बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य: बुबासँग छुट्याउनुहोस्
مصطفی (ओजिलका पिता) उनको कठोरताका लागि चिनिन्छ। जुलाई जुलाई 2011 मा उहाँ आफ्नो छोराको एजेन्सी हुनुभयो। अस्मिताले ओजिलले आफ्नो भाई Mutlu को नियुक्तिको निर्णय गरेपछि मित्तै हालको भूमिकालाई त्याग्नुभयो। यसले पिता र छोराबीच तनावको सुरुवात देख्यो। मस्टाको प्रेमिकाले मासुत क्याप्लिस्टोको दावी गर्दै उनको पुत्रको लागि तिनको एजेन्टको रूपमा डम्प गर्ने निर्णयको लागि जिम्मेवार छ।
यसले धेरै मानिसहरूलाई चौंकाने जस्तो देख्यो। तिनका पिता, मस्फोटले तिनलाई बेवास्ता गरे पछि उनको छोरालाई मुकदमा लिए।
एक रिपोर्ट अनुसार; 'मित्तिक ओजिलसँग सम्झौता गर्न सजिलो व्यक्ति होइन। उनी मेसोतमा धेरै ध्यान केन्द्रित थिए र उनीहरूको ठूलो प्रतिभा थियो भनेर थाहा थियो। उहाँ प्रत्येक हरेक प्रशिक्षणको लागि प्रत्येक म्याचमा जानुहुन्छ। यो आफ्नो कम भुक्तानी धातु खनन कार्य छोडेर उनको छोरोको क्यारियर पछ्याउन पछि उनी आफ्नो जीवनको केन्द्र बन्नुभयो। '
उनको पितालाई छोडेर निराशाको कारण मेसोट ओजिल मार्केटिंग कम्पनीको अदालतमा लगाइयो। उनले आफ्नो हानिमा एक पाउन्ड 495,000 क्षतिपूर्ति माग गरे। मासुत ओजिलले आफ्नो कार्यवाही पछि आफ्नो पितासँग बोलेको छैन। बुबा र छोटो सम्बन्ध जुन एक पटक बलियो हुन्छ भनिएको कानूनी युद्धले नष्ट गर्यो।
उनको मांगहरु को अवलोकन मा, Mesut Ozil को वकील पनि 800,000 को फिर्ता ले भन्यो कि पिता आफ्नो छोरा ले केहि नहीं गर्न को लागि ले लिया। यो मामला अन्ततः अदालत बाहिर बसेको थियो। यो मुद्दा मासुत ओजिलको आमाबाबुले छोराको निर्देशन पछ्याएर आमासँग बिगाडिदिए।
Mesut Ozil बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य: एक गंभीर मुस्लिम तर ...
Mesut Ozil एक मुस्लिम हो। विशेष गरी, उहाँ एक भक्त मुस्लिम हुनुहुन्छ, जसले प्रत्येक खेलको खेल खेल्नुअघि पवित्र कुरानलाई पढाउँछ। बर्लिन आधारित दैनिक "डेरे ट्याग्सस्पिक्गल" मार्फत कुरा गर्दै, मेसोतले भने, "म बाहिर जानुहुन्छ (पिचमा) पहिले मलाई कुरान पढ्न। यसले मलाई साँच्चै मलाई ध्यान केन्द्रित राख्न मद्दत गर्दछ। म प्रार्थना गर्दछु र मेरा साथी साथीहरूलाई थाहा छ कि तिनीहरू मेरो प्रार्थनाको समयमा मसित कुरा गर्न सक्दैनन्। "
एक व्यावहारिक मुस्लिम होने को बावजूद, Mesut Ozil गर्मी को समयमा तेजी को मुश्किल लगता है। यो एक फुटबलरको रूपमा आफ्नो कामको कारण हो।
यसबाहेक उसले जर्मन राष्ट्रिय गन्तव्यको दौडान कुणानका पदहरू पढाउँछन्। यो किनभने यो राष्ट्रिय गान गाँस्न सक्दैन।
Mesut Ozil बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य: बच्चाको रूपमा शतरंज खेल्नुभयो
Mesut Ozil कसरी खेलाउन सिक्यो शतरंज जर्मनी, जर्मनीको गेलिसेनकिचको प्रवासी पन्तमा बढ्दै गर्दा। फुटबल जस्तै, उनले बच्चाको रूपमा शतरंजलाई पनि अनुकूल गरे।
उनी आफ्नो विद्यालयको फुटबल टोली र शतरंज क्लबको सदस्य थिए। मेसोट पनि चासो थियो गणित विद्यालयमा। शतरंज र गणितका लागि उनको प्रेमले स्थानीय सोचको लागि प्रशस्त बाटो र खेतको क्षेत्रमा खेल्न सक्ने क्षमता छ।
Mesut Ozil बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य: अमरता
धेरैजना प्रशंसकहरू प्रश्न सोध्छन्; के मोस्ट ओजल IMMORTAL ?. धेरै प्रशंसकहरु ले देर देखि F1 किंवदंती, Enzo फेरारी को लागि आर्सेनल मान्छे को समानता मा मंदी मिल्यो।
यहाँ सम्म कि उनको मान्छेहरु लाई लाग्छ कि मासुत ओजिल एन्जो फेरारी को पुनर्जन्म हो। इटालियन मोटर रेसिंग चालक र उद्यमी 14 अगस्त, 1988 मा मृत्यु भएको थियो - 15 अक्टोबर, 1988 अक्टोबर अक्टोबर मा जन्मेदेखि पुन: पुनर्मरण प्रक्रिया को लागी मात्र पर्याप्त समय भयो। यो सिद्धान्त बौद्ध र ताओइस्ट शिक्षामा समर्थित गरिएको छ, जसले मानव आत्मा केटालाई छोड्छ र मृत्यु पछि पुनरुत्थान गर्दछ। यो कारण धेरै नयाँ युग मान्छे को विश्वास छ कि फेरारी को संस्थापक एन्जो फेरारी, मेसट ओजिल को रूप मा पुनर्जन्म।
अभिनेता र समय यात्राको बारेमा कथाहरू केही नयाँ छैनन्।
Mesut Ozil बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य: उहाँ मानव होइनन्
तिनको सहयोगमा कुनै सीमा छैन। यसैले धेरैले विश्वास गर्दैन कि त्यो मानव होइन। मेसोट ओजिलले कुन कुरालाई हेर्न खोज्न गाह्रो देखिन्छ। तल चित्रले साबित गर्दछ।
Mesut Ozil बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य: दान
मेसोट उनको मनमोहक झुकाव को लागि धेरै धर्मार्थ संगठनहरु लाई ठूलो रकम दान को लागि पनि प्रसिद्ध छ। उनले लगभग 2014 ब्राजिलका बालबालिकाहरूको उपचारमा उनीहरूको सम्पूर्ण5विश्व कप पुरस्कार पैसा (लगभग USD 00, 000, 23) योगदान दिए।
तिनीहरूको शल्य चिकित्सा र चिकित्सा उपचार सफल भयो। उनले ब्राजिलका मानिसहरूको न्यानो आतिथ्यको लागि धन्यवादको रूपमा गरे। यो उनको BigShoe परियोजनाको भाग थियो। प्रोजेक्ट जूता को जूता द्वारा समाप्त भएको एक ब्राजील को एक उपहार को रूप मा समाप्त भएको छ जो आगामी फुटबलर बन्छ।
2016 को मई मा, Mesut पनि जॉर्डन मा Zaatari शरणार्थी शिविर का दौरा किया और 80,000 विस्थापित सीरिया शरणार्थीों के बारे में गठन के अपने प्रशंसकों के लिए autographs पर हस्ताक्षर किए।
उनले सिरियाको गृहयुद्धको परिणामस्वरूप बेपत्ता भएका बच्चाहरूको हेरचाह गरे। ओजिलले शिविरको साथसाथै बच्चाहरु संग खेल्दै, अटोग्राफमा हस्ताक्षर गरी फुटबल शर्ट बाहिर निस्काउँदै।
Mesut Ozil बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य:उहाँको आँखाको बारेमा
यदि तपाईं Mesut Özil को आँखा को एक तस्वीर को देखो, तपाईं एक छवि हो छवि कसैको कण रोगबाट पीडित (उर्फ तौलिया आँखा आँखा रोग)। तर उहाँ यस्तो प्रकृतिको कुनै अवस्थाबाट पीडित हुनुहुन्न।
तीनवटा बिन्दु जसले हामीलाई विचार गर्छ कि ओज्ज एक कब्र रोगको पीडा होइन:
पहिलो, उनको आँखा कुनै उपस्थित छैन साइन लाडो वा अन्य लक्षणहरूशर्तमा सामान्य।
दोस्रो, कण रोग एक शर्त हो जहाँ शारीरिक प्रभाव अक्सर आउँछ र हिंड्छ, वा गम्भीरतामा टाढान्छ। ओजिलका आँसुहरू धेरै सन्तुलित छन्।
अन्तमा, कब्र रोग जस्तै एक शर्त हुनेछ साइड इफेक्ट मनपरी दृष्टि, पीडा र दुखाइ, वा आँखा हानिकारक जस्तै। यो उच्च स्तरमा एकदम धेरै असंभव एक पेशेवर खेलाडी हुन सक्छ।
Mesut Ozil बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य:उहाँका पुस्तकहरू
पुस्तक उनको लागि समर्पित गरिएको छ। यो शीर्षक छ "Mesut Özil सुपरस्टार"। यो एक भावुक प्रशंसक द्वारा गरिएको थियो जसले जोर दिएका थिए उसको नाम गुमनाम रह्यो।
मित्यूटले यो माया गरे र उसलाई सम्झौता गरे जुन उनलाई अरूले लेखेको छ 'महानताका लागि गल्ती'.
Mesut Ozil बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य: Accolades र उपलब्धि सूची
(1) आर्सेलसेल एफसी संग उसले एफएसीएसपी तेस्रो जितेको छ (2013-14, 2014-15, 2016-17) र 2014,2015 र 2017 मा एफए समुदाय सामुदायिक।
(2) रियल म्याड्रिड संग, उहाँले ला लिगा (2011-12), कोप डेल रेय (2010-11) र 2012 मा Supercopa de España जीता छ।
(3) Werder Bremen संग, उनले DFB-Pokal (2008-09) जीता गरेका थिए।
(4) जर्मनीसँग, उहाँले फीफा विश्व कप (2014) र UEFA युरोपेली अन्तर्गत 21 च्याम्पियनशिप (2009) जित्नुभयो।
अन्य पुरस्कारहरू समावेश छन्
2009-2010 बन्डस्लिला शीर्ष सहायकहरु
2011, 2012, 2013 र 2015 जर्मन प्लेयर को वर्ष पुरस्कार
2010 फीफा विश्व कप म्याच म्याच (घाना बनाम)
2010-2011 UEFA चैंपियन्स लीग शीर्ष सहायकहरूका लागि Jose Mourinho र रियल म्याड्रिड
2011-2012 ला लीगा जे एस को लागि शीर्ष सहायकहरुOour Mourinho र रियल म्याड्रिड
2015-2016 प्रिमियर लीग शीर्ष सहायकहरूका लागि आर्सेन वेंजर र ईश्वर
2015-2016 सीजनको खेलाडी शस्त्रागार
2012 UEFA सर्वश्रेष्ठ युरोप युरोपमा (10th ठाँउ)
Ozil Mesut जून २,, २०१ 28 साँझ :2018: १। बजे
जापानको होंडा किइसोकले राम्रो काम गरिरहेको जस्तो देखिन्छ कि कलेजको रोगको सामना गर्दा विश्व स्तरको पेशेवर एथलीट।
Asu अक्टुबर,, २०१ At १०::० अपराह्न
तिमी मेरो फ्य्वेरेट फुटबल खेलाडी
क्याथरीन स्कून डिसेम्बर २,, २०१ At ११::29। अपराह्न
तपाईँले अलि-क्रिएटेड प्रशंसकको जस्तो आवाज लिनुहुन्छ। यसबाहेक, उनी अमीन गुल्सलाई डेटिङ गर्दै छन् तर सत्यमा उहाँ मेरो पति हुनुहुन्छ।